Motivation for success :: भाग १ : साधारण तर अतिमहत्त्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग
प्रकाशित मिति : शनिबार, असोज ३० २०७८
काठमाडौँ – धेरै मानिसहरू भन्छन् कि साना–मसिना कुरामा ध्यान दिनुहुँदैन । उनीहरू गलत भनिरहेका छन् । कुरा सानो होस् या ठूलो, आखिर कुरा, कुरा नै हो ।
एउटा घटना मात्र पनि हुन सक्छ । जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै क्षण पनि हुनसक्छ । त्यसको प्रभाव जीवनमा पर्न सक्छ र पर्छ पनि । परमाणु बमको शक्तिसँग सारा संसार परिचित छ । परमाणुबाटै परमाणु बमको जन्म हुन्छ । यही बम हजारौं कोस परबाट खसालेर कोसौं क्षेत्रफलको जमिनमा विध्वंस लिला गराउन सकिन्छ ।
संसारले जापानको दुई शहरमा भएको विध्वंस देखेकै छ । आजपनि जापानको नागासाकी र हिरोशिमामा विध्वंसको अवशेष बाँकी नै छ ।
एउटा सानो तुच्छ कमिला छ । तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कमिलामा के नै पो शक्ति हुन्छ र ? खुट्टाले कुल्चिदिने बित्तिकै मरिहाल्छ । के गर्न सक्छ र यसले ? यही तुच्छ कमिला हात्तीको सुडमा छिरेर टोकिदिन्छ भने हात्ती मर्न पनि सक्छ ।
थोरै भन्दा थोरै पोटासियम साइनाइड जिब्रोमा पर्नासाथ मान्छे मरिहाल्छ । एउटा सानो भनाइले मान्छेको जीवन नै बदलिदिन सक्छ । एउटा सानो औषधिको गोली यत्रो शरीरको दुखाइलाई निको पार्न सक्दछ । एउटा धागो छिनालिदिनुस्, तानाबाना सब अस्तव्यस्त हुन्छ । गीतारको एउटा तार चुंडालिदिनुस् सबै सुर बेसुर हुन्छ । यस्ता स-साना कुराको ठूलो महत्त्व हुन्छ ।
तपाईंले जेम्स वाटको नाम सुन्नुभएको होला । त्यो सानो केटो घरको लागि निकम्मा गनिन्थ्यो । जहाँ बस्दथ्यो, त्यही बसिरहन्थ्यो र घण्टौं कुनै एउटा चीजमा एकोहोरो हेरिरहन्थ्यो । यो उसको स्वभाव नै बनिसकेको थियो । यसले गर्दा उसले बेला–बेलामा काकीको खानुपर्दथ्यो ।
सानोभन्दा सानो कुरामा ध्यान दिने जेम्सको बानीले गर्दा विश्वले असाधारण कुरा पायो । वाफको शक्तिले रेल, ठूला–ठूला कारखाना र मेसिन चल्न सक्दछ । जेम्स वाटको समयभन्दा पहिले पनि अंगेनामा बसालेको केट्लीबाट पानीको बाफ बाहिर निस्कन्थ्यो ।
तर, बाफको शक्तिलाई कसैले वास्ता गरेन । कसैले चिन्न सकेन । कसैले यति मसिनो कुरामा ध्यान दिन सकेन । जेम्स वाटले केट्लीको ढकनी विस्तारै खट्खट् उफ्रिरहेको देखे । बाफमा लुकेको शक्ति पत्ता लगाएर जेम्स वाटले संसारलाई ठूलो गुण लगाइदिए । स्टीभेन्सले यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर सर्वप्रथम रेलको आविष्कार गरे ।
‘ट्रोजन युद्ध’ किन भयो ? कैयौं दिनसम्म घेराबन्दी र ठूलो नरसंहार भयो । कारण कति सानो, कति तुच्छ र साधारण छ । त्यो हो हेलेन नाम गरेकी स्त्रीको सुन्दर अनुहार ।
तसर्थ, साना साना कुराहरुमा हामीले पनि ध्यान दिएको खण्डमा जीवन निकै आनन्ददायी हुनेछ ।